mardi, 12 septembre 2017 22:48
Raharaha Dabaraha: Tapaka ora roa ny fifamoivoizana RN34, tsy nihemotra tamin'ny baomba lakrimozena ny fokonolona
Nitokona teo amin’ny tetezan’i Marofototra, Kaominina Bemanonga amin’ny lalam-pirenena faha-34 ireo tantsaha misedra olana amin’ny ranon’i Dabaraha androany talata 12 septambra. Tsy nihetsika izy ireo na nandefasan’ny mpitandro ny filaminana baomba mandatsa-dranomaso aza. Tapaka nandritra ny ora roa ny fifamoivoizana vokatr’io, tsy niala ny olona raha tsy tonga teo ny Depioten’i Mahabo.
Hidina any amin’ny riandrano fototry ny olana, noho ny fanimban’ny sasany hatrany ny hidin-drano apetraka ao ny Fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana miaraka amin’ingahy Depiote ny alarobia, narahina fifanarahana an-tsoratra izany hisorohana ny fanararaotana.
mardi, 12 septembre 2017 07:01
Bemanonga: Hidina an-dalambe ny mpampiasa ranon’i Dabaraha
Hitokona, hanakan-dalana eo amin’ny tetezan’i Marofototra, Kaominina Bemanonga-Morondava ireo tantsaha misedra olana amin’ny ranon’i Dabaraha ny talata 12 septambra.
Niandry vahaolana izy ireo, manoloana ny sotasota sy fanimban’ny sasany ny hidin-drano ka mahatonga ny rano tsy ho tonga amin’ny velaran-tany maro, ka dia tonga amin’izao fitokonana izao haneren’ny tantsaha ny mpitondra hikaroka vahaolana aingana hisorohana ny fifandonan’ny samy vahoaka.